Farmaajo oo faragelin ku haya doorashadda Aqalka Sare | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Si ka duwan 2016 ayaa loo soo xulayaa Xubnaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka 11aad, waxaana durba soo baxay cabasho xoog leh oo siyaasiyiin badan ay muujinayaan.
Sida uu dhigayo habraaca doorashadda, Madaxda Maamullada ayaa awood u leh inay go'aan ka gaaraan cida u tarmaysa kuraasta, waxayna midan u fududeysa Villa Somalia inay saamen ku yeelato doorashadda.
Xog hoose oo Keydmedia Online heshay ayaa sheegaya Farmaajo uu galaangal xooggan ku leeyahay hanaanka soo xulista Musharixiinta, isagoo ka shaqeynaya sidii ay kusoo bixi lahaayeen Xildhibaanad uu codka ka rabo Oct 10.
Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Feb 8, ayaa xulufo la ah saddex Madaxweyne maamul Goboleed, kuwaasoo kala ah Lafta-Gareen, Guudlaawe iyo Qoor-Qoor oo isaga uu dhisay, waxayna kala shaqeynayaan dib u doorashadiisa.
Musharx kasta oo aan xiriir kala dhaxeynin Madaxweyne Maamul goboleed way ku adkaatay inuu kusoo baxo liiska, waana arin muujinaysa musuq-maasuq xoog leh inuu ka jiro doorashadda Soomaaliya.
Xitaa Gudiyadda doorashooyinka waxay ku yimaadeen xubnaha soo xulis Villa Somalia dusha ka maamulaysay, oo lagu soo daray shaqsiyaad la yaqaano oo taageera Farmaajo.
Doorashadda waxay ka billaabatay Jubbaland Khamiistii, July 25, waxaana la filayaa in Koonfur Galbeed noqon doono maamulka 2aad maalmaha soo socda, iyadoo Baydhabo ay gaareen Musharixiinta iyo Gudiga doorashadda Heer Federaal.
Doorashadda dhacday Jubbaland waxay ahayd mid horey loo saadaaliyay natiijadeeda, maadaama ragga Musharixiinta uu Axmed Madoobe soo saaray waxay ahaayeen kuwa u badan Beesha Daarood, oo isaga kasoo jeedo.
Senator-kii ugu horeeyay Ilyaas Badal Gaboose waa DAAROOD, wuxuu ka yahay Ogaadeen, gaar ahaan jufadda Maxamed Subeyr.
Waxaa ku xigay C/llaahi Sheekh Ismaaciil [Fartaag], waa DAAROOD, wuxuu ka yahay Mareexaan, gaar ahaan lafta reer Diini.
Senator-ka 3aad ee la doortay, C/risaaq Maxamed Cismaan, waa Majeerteen, gaar ahaan Wabeneye.
Kaliya Iftiin Xasan Baasto ayaa ka yimid Beelaha kale ee dega Jubbaland, isagoo u dhashay Beesha Cawrmale.
Bishii Maarso 2021, Axmed Madoobe ayaa magacaabey Golle Wasiiro oo ka kooban 23 xubnood, kuwaasoo 17 kamid ah ay DAAROOD yihiin, wuxuu dhamaan beelaha kale ee dega Jubbaland u qoondeeyay 6 wasiir.